မုဒုံမြို့နယ်မှာ NLD နဲ့ UEC ပေါင်းပြီးမဲ ၄၀၀၀၀ ကျော်ခိုးကြတယ်ဆိုတာ တကယ်လား? – Think Before You TRUST
Home>>သတင်းအတုစစ်ဆေးခြင်း>>နိုင်ငံရေး>>မုဒုံမြို့နယ်မှာ NLD နဲ့ UEC ပေါင်းပြီးမဲ ၄၀၀၀၀ ကျော်ခိုးကြတယ်ဆိုတာ တကယ်လား?
တွေးပြီးမှယုံNovember 10, 2020
မုဒုံမြို့နယ်မှာ NLD နဲ့ UEC ပေါင်းပြီးမဲ ၄၀၀၀၀ ကျော်ခိုးကြတယ်ဆိုတာ တကယ်လား?
ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ သတင်းတုတွေမျိုးစုံထွက်ခဲ့ကြသလိုပဲ အခု ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလမှာလည်း မဲရလာဒ်တွေ၊ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းတုတွေကတော့ မျိုးစုံထွက်ပေါ်နေပြန်ပါတယ်။ ခုတစ်ခါမှာဆိုရင် “မွန်ပြည်နယ်၊ မုဒုံမြို့နယ်မှာ NLD ပါတီနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပေါင်းပြီး မဲလေးသောင်းကျော်ခိုးခဲ့လို့ အနိုင်ရရှိထားတဲ့ ငါးနေရာလုံး ပယ်ဖျက်ခံလိုက်ရတယ်” ဆိုတဲ့ သတင်းကို Myanmar American News ဆိုတဲ့ ပေ့ချ်ကနေ နိုဝင်ဘာလ၊ ၁၀ ရက်နေ့က တင်ထားခဲ့ပြီးတော့ ပြန်လည်မျှဝေသူပေါင်း ၃၅၆၉ ဦးအထိရှိနေပါတယ်။ ဒီသတင်းကို အဓိက ဒီမှာ ဖြန့်ထားကြတာပါ။
ဒီသတင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွေးပြီးမှယုံကနေ စစ်ဆေးခဲ့ရာ အောက်က အချက်အလက်တွေအရ သတင်းတုဖြစ်တယ်ဆိုတာ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
မုဒုံမြို့နယ်မှ သတင်းများ၊ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်များကို အချိန်နဲ့တပြေးညီဖော်ပြပေးနေတဲ့ Mudon Media ရဲ့ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ သတင်းအတုသာဖြစ်တယ်လို့ အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
မုဒုံမြို့နယ်က ရွေးကောက်ပွဲမှာ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ(MUP) က အစောပိုင်းတည်းက မဲအသာစီးနဲ့ အနိုင်ရနေခဲ့တယ်ဆိုတာ Mudon Media Page က မဲရလာဒ်ဖော်ပြချက်တွေမှာ တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
NLD ပါတီရဲ့ ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီမှ အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးဖြစ်သူ မုံရွာအောင်ရှင်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာတွင်လည်း ယင်းဖြစ်စဉ်သည် သတင်းအမှားတစ်ခုသာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် နိုဝင်ဘာလ၊ ၉ ရက်နေ့က “ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အရေးယူထားကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း” ဆိုတဲ့ ကြေညာချက်မှာလည်း ဒီဖြစ်စဉ်မပါခဲ့ပါဘူး။
ပြည်သူ့လွှတ်တော် – နိုင်စံတင် – MUP
အမျိုးသားလွှတ်တော် – နိုင်ဌေးနိုင် – MUP
ပြည်နယ် (၁) – ဒေါ်ခင်ကျော့ဖြူ – NLD
ပြည်နယ် (၂) – နိုင်မွန်ရာဇာ (ခ) ဦးစိုးဝင်း – MUP တို့က အနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်များကို ဒီနေ့မနက်ခင်းကနေစလို့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ Page မှာ ဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေလို သတင်းအမှားတွေကို လွယ်လင့်တကူ မယုံကြည်ကြဖို့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ ကြေငြာချက်တွေနဲ့ တရားဝင်မီဒီယာတွေရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ကို သာ ယုံကြည်ကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေဟာ အများပြည်သူကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ အထင်အမြင်လွဲမှားအောင်လုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတုတွေ့လို့ စစ်ဖို့အခက်အခဲရှိခဲ့ရင် တွေးပြီးမှယုံ ရဲ့ Chat Box နဲ့ အချက်အလက်စစ်ဆေးပေးရန်ပန်ကြားလွှာမှာ အချက်အလက်ဖြည့်သွင်းပြီး လာရောက်မေးမြန်းလို့ ရပါတယ်နော်။